Iphrofayela Yenkampani - Jinan Tianda Textile Technology Co., Ltd.
UJinan Tianda Textile Technology Co., Ltd.
Sikhuthaza ugqozi lwasekhaya, sixhuma umsebenzi wobuciko wabadwebi nabaqambi kubantu
nezindawo emhlabeni jikelele.
Njengoba sinezitolo ezingaphezu kwezingu-100 kanye nabalingani bama-franchise emazweni ayi-9, siyindawo yamazwe omhlaba efenisha yangaleso sikhathi neyesimanje, izindlu zasendlini kanye nokuhlobisa okusiza abantu ukuba bamukele i-Welcome Life In.
Izinhlobo zethu zokuphila zinikela ngokuphila okuphefumulelwe ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, imiklamo ekhethekile, kanye nesitayela esingapheli isikhathi - konke kunikwa amandla ngamadizayini wedijithali namathuluzi wokubona anikezela ngezixazululo zokuthenga ezingenamthungo esitolo naku-inthanethi.
Ngobuhle obuhlukile bokwakha, imvelo yesitolo, kanye nomphakathi oku-inthanethi, sizibandakanya namakhasimende ethu ngemithombo yezokuxhumana, ukuthengwa kwamaselula, izinsizakalo zokwakha, ukubhaliswa kwezipho, nokuningi.
Indlela engcono yokuthenga online ifenisha, imihlobiso yasekhaya nokunye okuningi!
Sikhetha ngesandla futhi sikhethe okuhle ngekhwalithi nesitayela sakho nekhaya lakho.
Kungani uchitha izinsuku ushayela kusuka esitolo ukugcina uzama ukuthola lokho kubukeka okuhle noma ucezu oluyingqayizivele. Thola konke okufunayo nokuningi kusuka kunethezekile lekhaya lakho.
Awuwedwa. Ukusuka ekuphequluleni, uku-oda, ukulethwa ... silapha ukukusiza ngazo zonke izindlela ozihambayo. Ithimba Lethu Lokunakekelwa Kwamakhasimende lingaphendula noma imiphi imibuzo ongase ube nayo, futhi linikeze nosizo olwenziwe ngezifiso: ukuhlela, ukutholakala, ama-oda amaningi, ama-oda wangokwezifiso nezinketho zokulethwa.
Futhi siyinkampani yokuziqhenya yamaShayina! Zonke izintengo zisezimalini ze-CAD futhi ngeke ubone noma iyiphi imali emangazayo noma imali yokushintshanisa ekuphumeni.
Thenga ukukhethwa kwethu okubanzi kwefenisha esezingeni eliphakeme nokuhlobisa kwasekhaya kuwo wonke amagumbi, kanye nohlobo oluningi lukamatilasi, izinto zikagesi nezinto zikagesi ngamanani angenakushaywa! Thola konke okufunayo kusuka kunethezekile lekhaya lakho.
Thenga ngokuzethemba! Isiqinisekiso sethu sokwaneliseka nesithembiso sokufaniswa kwentengo kuqinisekisa ukuthi uhlala ujabulile ngokuthenga kwakho.